Mugabe Told to Step Down Out of 'Love' - South African Party - allAfrica.com
Mugabe Told to Step Down Out of 'Love' - South African Party
The Economic Freedom Fighters said that their insistence that Zimbabwean president Robert Mugabe should step down was due to their wanting to tell him "the truth" owing to the "love" that they have for the 92-year-old leader.
South Africa: 'We Love Mugabe Enough to Tell Him to Go Rest,' EFF Tells Zanu-PF
The Economic Freedom Fighters (EFF) on Wednesday continued its assault on Zimbabwe's Zanu-PF, saying it rejected the phenomenon of "lead to the grave" that the ruling party had… Read more »
Left: Economic Freedom Fighters leader Julius Malema. Right: Zimbabwean President Robert Mugabe.
South Africa: EFF Statement on Zanu PF's Response to Calls for President Mugabe to Step Down
EFF, 26 January 2017
The EFF reaffirms its position that President Mugabe's occupancy of the position of president is not good for the radical African political program. He is the bastion of the… Read more »
Officials from Zimbabwe's ruling party have downplayed Julius Malema's criticism of President Robert Mugabe, dismissing the outspoken Economic Freedom Fighters' leader as "a ... Read more »